August 2, 2021 - Babal Khabar
Aug22021 by EditorNo Comments
जिल्ला प्र,हरी कार्यालय दाङले शारीरिक रूपमा मोटा देखिने प्र,हरी जवानदेखि सबैलाई दैनिक दौडाउन सुरू गरेको छ। नयाँ प्र,हरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्ले जिल्लामा आएको दोस्रो दिनदेखि नै त्यस्तो अभियान सुरू भएको हो। ‘म दाङ आएको भोलिपल्टदेखि नै बिहान दैनिक रूपमा सबैलाई दौडाउन थालेको छु,’ एसपी काफ्लेले भने, ‘बिहान म पनि सधैँ दौडिन्छु र मोटा प्र,हरी सबैलाई अनिवार्य दौडाउन लैजान्छु।’ जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा कार्यरत मोटा प्र,हरीलाई जिल्ला झिकाएर दैनिक दौडाएर फिट भएपछि पुनः सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमै खटाइने एसपी काफ्लेले बताए। ‘हाम्रोमा जागिर खाने कोही त यति मोटाएका छन् कि राम्रोसँग हिँड्नपनि सक्दैनन्,’ एसपी काफ्लले भने, ‘जो आँफै राम्रोसँग हिड्न सक्दैनन्,उनीहरुलाई दौडाएर, पिटी खेलाएर फिट पार्ने मेरो योजना हो।’ दाङ सरूवा भएर आएको दोस्रो दिनदेखि एसपी दौडिन थालेपछि डिएसपीलगायत सबै शारीरिक रूपम
यस्तो छ पारस शाह चढ्ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकल,मुल्य सुन्दा सात्तो जाने हेर्नुहोस् कति पर्छ?
काठमाडौं साउन गत शुक्रबार राति पारस शाह हेलमेट विनै मोटरसाइलमा निस्किएर प्रहरीसँग गरेकाे लफडाबाजी भाइरल भयो । हेलमेट नलाएको भन्दै एक प्रहरीले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा उनलाइ रोकेका थिए । ट्राफिक प्रहरीले रोकपछि उल्टै पारस शाह प्रहरीसँग झगडा गर्न लागेको भिडियो जताततै चर्चाको बिषय बन्यो ।पछिल्लाे केही समयदेखि सोही बाइकका कारण उनी चर्चामा आउने गरेका छन । चर्चामा मात्रै होइन पारस यस्तै बिषयमा पटक पटक बिवादित बनिरहेका हुन्छन् ।खासगरी उनी घरबाहिर निस्कँदा बाइक लिएर हिड्ने तर, कहिले हलमेट नलगाउने,कहिले मदिरा पिउने गर्छन । तर, पासरकाे यस्ता कृयाकलाप बाहिरिँदा पारसकै बढी चर्चा हुन्छ न कि बाइककाे । कुन बाइक चढ्छन पारस ? पारस शाह बहु प्रतिष्ठित हार्ले डेविडसन बाइक चढ्ने गरेका छन । उनी सोही बाइकमा कहिले पोखरा,कहिले काठमाडौं लगाएत विभिन्न ठाँउ घुम्ने गरेका छन । पारस हार्ले डेविडसनको पनि पुरानो मोडल हेरी
तौल कसरी बढाउने ? यस्तो छ तरिका
यहाँ धेरैलाई तौल घटाउने चिन्ता छ । कसरी तौल नियन्त्रण गर्ने ? उनीहरु अनेक उपाय खोजिरहेका छन् । त्यसो त तौल घटाउने चक्करमा क्लिनिक धाउनेहरु पनि उत्तिकै छन् । छिटो र सजिलो ढंगले तौल घटाउने व्यापार पनि राम्ररी फस्टाउँदैछ । तर, चिन्ता तौल घटाउने मात्र होइन, तौल बढाउने पनि छ । कतिपयलाई भने घट्दो तौल वा शरीरको मापदण्डभन्दा कम तौलले चिन्ता बढाएको छ । मान्छेको तौल उसको उचाईबाट निर्धारण गरिन्छ । कति उचाईको मान्छेका लागि कति तौल उपयुक्त हुन्छ भनी निर्धारण गरिएको छ । हाम्रो उचाई अनुसार तौलको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । जस्तो कि पाँच फिट पाँच इन्च अग्ला व्यक्तिको तौल ६० केजीसम्म सहि मानिन्छ । त्यो भन्दा अधिक कम वा धेरै तौल हुनु स्वभाविक होइन । अस्वभाविक तौल रोगको घर हो । तौल किन बढाउने त ? स्वस्थ्य शरीरको मापदण्ड पुरा गर्न । त्यसबाहेक सुहाउँदिलो ज्यान देखाउन । उचाई अनुरुप मोटाइ भएन भने ज्यान खिरिलो
विश्वको महंगो फोन गौडाको छालाको कबर भको भर्टु अब नेपालमा, कती पर्छ हेर्नुहोस्
सक्कली लेदर तथा महंगा धातु र पत्थरसँगै ह्याण्डमेड हुने भर्टुका फोनहरु निकै महंगा हुने गर्दछन् । पि्रमियम लेदर ब्याक रहेको आई भर्टु फाइभ जी स्मार्टफोनमामा ६.६७ इन्चको एमोलेड स्क्रिन रहेको छ, जसको रिजोलुसन १०८० गुणा २४०० पिक्सेल एफएचडी छ जसको रिफ्रेस दर १२० हर्ज छ । धातुको फ्रेम रहेको स्मार्टफोनमा प्रयोग गरिएको छालाको आधारमा दुई मोडेलमा उपलब्ध छ । एउटामा गोहीको छाला प्रयोग गरिएको छ भने अर्कोमा बाच्छाको छाला । आइभर्टु फाइभ जी मा स्नापड्रागन ८८८ फाइभ जी अक्टाकोर प्रोसेसर रहेको छ । यो प्रोसेसर क्वालकोमको फ्लागसीप चिपसेट हो । यसमा १२ जिबीको र्याम र ५१ जिबीको इन्टर्नल स्टोरेज रहेको छ । यो स्मार्टफोनमा क्वाड क्यामरा सेटअप रहेको छ । प्राइमरी क्यामरामा ६४ मेगापिक्सेलको सेन्सर रहेको छ । त्यस्तै अर्को अल्ट्रावाइड क्यामरा पनि ६४ मेगापिक्सेलकै छ । त्यस्तै अन्य दुईवटा क्यामरामा एउटा ५ मेगाप
दम्पतीहरु एक अर्काबाट के चाहन्छन् ? यस्तो रहस्य खुल्यो
प्राकृतिक रूपमा एक अर्काबाट अलग भए पनि पुरुष र महिलासँगसँगै जीवन बिताउने सारथिहरु हुन् । महिला र पुरुषबाट नै परिवार र सम्बन्ध कायम हुन्छ । तर तिनीहरूको चाहनाहरू फरक हुन्छन् । एक सफल सम्बन्धको लागि दुवैलाई उनीहरूको पार्टनरले उनीहरूबाट के चाहन्छ भनेर जान्नु आवश्यक हुन्छ । दम्पतीहरु एक अर्काबाट के चाहन्छन् ? पुरुष– यस्तो होस् जीवनसाथी आत्मनिर्भर बनून : आजका शिक्षित र आत्मनिर्भर युवाहरू आफ्नी श्रीमतीलाई पनि आत्मनिर्भर बन्न र हरेक मुद्दामा उसको आफ्नै धारणा होस् भन्ने चाहन्छन् । केटाहरु श्रीमानलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने र संसार केवल उनका पतिमा मात्र सीमित छैन भन्ने धारणा राख्न चाहन्छन् । प्रत्येक घण्टामा कल गरेर ’तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, कहिले आउँदै हुनुहुन्छ’ भनेर सोध्नुको सट्टा आफू पनि केही काममा व्यस्त हुने महिला केटा मान्छेको रोजाइमा पर्ने गर्छन् । भावनात्मक रूपमा स्थिर रहून् : पुरुषह
यस कारण जरुरी छ किशोरवयमा यौन शिक्षा, नत्र यस्तो जोखिम हुने
सामान्यत ८–९ बर्षपछि बालबालिका किशोर चरणमा प्रवेश गर्छन् । यो एक संवेदनशिल उमेर हो । यतिबेला उनीहरुको शारीरिक र भावनात्मक परिवर्तनहरु तिब्र रुपमा देखिन थाल्छ । मासिक स्राव हुने, स्तन बढ्ने, स्वर बद्लिने, रौं पलाउने आदि । शारीरिक रुपमा उनीहरुमा परिपक्कता आउन थाल्छ । यसले उनीहरुको मानसिक र भावनात्मक स्थितीमा पनि प्रभाव पार्छ । उनीहरु यसबेला बढी चञ्चल हुने, बहकिने गर्छन् । आफ्नो मनलाई नियन्त्रण राख्न सक्दैनन् । ठूलठूला कुराको इच्छा राख्छन् । यो यस्तो उमेर हो, जहाँबाट उनीहरुले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्छन् । वा भविष्यको बाटो तय गर्न सक्छन् । यतिबेला उनीहरुले सही मार्गदर्शन र संगत पाएमा सही बाटो हिँड्छन् । सही मार्गदर्शन पाएनन् भने गलत दिशातर्फ लाग्न सक्छ । त्यसैले यतिबेला अभिभावकले आफ्ना सन्तानमाथि ख्याल राख्नुपर्छ । तर, उनीहरुलाई धेरै निगरानी गर्नु वा नियन्त्रणमा राख्नु पनि उचित हुँ
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि अति उपयोगी यी ६ अभ्यास, पढौ र सक्दो सयार गरौ
बदलिएको जीवनशैली र गलत खानाका कारण युवाहरुलाई आजकल धेरै रोगहरुको शिकार बनाएको छ। यस्ता दीर्घ रोगहरु अहिले सबै उमेर समूह र सबै अवस्थाका मानिसहरूमा देखिने गरेको छ । पहिले, हृदयघात र मधुमेह जस्ता रोगहरु युवावस्थामा धेरै कम हुन्थ्यो। आज युवाहरु पनि ती रोगहरुबाट मुक्त छैनन् । २ प्रकारको रक्तचाप हुन्छन् । पहिलो उच्च रक्तचाप र निम्न रक्तचाप । उच्च रक्तचाप मुटु रोगको एक प्रमुख कारण हो। यो समस्या जो कोहीको लागि भारी हुन सक्छ र यसले धेरै हदसम्म हृदयसँग सम्बन्धित समस्या निम्त्याउन सक्छ । धेरै मानिसहरु रक्तचाप नियन्त्रण गर्न ट्याब्लेट लिन्छन् । लामो समयसम्म ट्याब्लेट लिनु शरीरको लागि राम्रो मानिँदैन। निसन्देह, रक्तचाप एक ट्याब्लेट खाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर तपाइँ आफ्नो जीवनको बाँकी समय त्यही ट्याबलेटका कारण समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ । उच्च रक्तचापको समस्या भएकाहरूको लागि केही प्राक
स्विमिङमा यसरि रमाएकी प्रियंकाको के बच्चा जन्मिसकेको होत ?
आमा बन्ने पक्का भएको सार्वजनिक गरेसँगै सामाजिक संजाल र मिडियामा नायिका प्रियंका कार्की चर्चामा छिन् । प्रियंकाले सार्वजनिक गर्ने तस्वीरलाई लिएर सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै आउने गरेका छन् । यसले, नायिका कार्कीलाई भने कत्ती पनि फरक पारेको छैन । प्रियंका आफै पनि गसिपमा रमाउने नायिका हुन् । प्रियंकाले केही दिन अगाडि मात्र बेबी सावरका तस्वीरहरु सार्वजनिक गरिन् । उनै, प्रियंकाले सन्तानलाई जन्म दिने दिन नजिकिदै जाँदा स्विमिङ पूलमा रमाएका तस्वीरहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् । स्विमिङ पूलमा प्रियंकासँगै उनका नजिकका साथीहरु पनि रमाएको देख्न सकिन्छ । प्रियंकाको यो तस्वीरमा आलोचनात्मक प्रतिक्रिया धेरै आएका छन् । तर, केहीले भने गर्भवती भएको समयमा जीवनको आनन्द लिएको भन्दै प्रियंकाको प्रशंसा पनि गरेका छन् । by : online khabar
राम्री केटिको नजरमा बिहेका लागि यूवकमा किन खोज्छन यस्तो ३ गुण, हेर्नुहोस्
नायिका अदिती वुढाथोकी चलचित्रका कारण भन्दा पनि सामाजिक संजाल इन्स्टाग्रामका कारण बढी चर्चामा रहन्छिन् । दैनिकजसो, सामाजिक संजालमा आफ्नो बोल्ड फोटो पोष्ट गर्दै आएकी अदितीलाई मन पराउनेहरुको संख्या ११ लाख भन्दा धेरै छ । यसैले, पनि अदिती आफ्ना फ्यानहरुसँग इन्स्टामा कुराकानी गर्न मन पराउँछिन् । नेपालमा चलचित्र र भारतमा मोडलिङ गर्दै आएकी अदितीलाई उनका फ्यानले बिहेको बिषयमा पनि प्रश्न राख्ने गरेका छन् । अदितीले फ्यानसँग साक्षात्कार गर्दै गर्दा उनका केही फ्यानले उनको बिहे योजनाका बिषयमा पनि सोधेका थिए । एक फ्यानले तपाइ बिहेका लागि यूवकका ३ गुण के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर सोधेका छन् । जसमा अदितीले लेखेकी छिन्–‘मलाई नम्र, वफदार र मिहिनेती मान्छे मनपर्छ । साथमा, एक अर्कासँग जोडिन पनि निकै आवश्यक छ ।’ अदितीले बिहेका लागि यूवक र यूवतीविच बलियो प्रकारको सम्बन्ध जोडिन आवश्यक रहेको पनि बताएकी छ
एक युवतीको महत्वाकांक्षा र किन राखिन् भाडाको कोख ( भिडियो सहित )
भारतमा सेरोगेसी संस्कार खुब फस्टाएको छ । यसै विषयमा आधारित फिल्म हो, ‘मिमी’ । यो आफैंमा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । तर, यसलाई हल्काफुल्का र मनोरञ्जक तरिकाले पेश गरिएको छ । फिल्मको कथा एकदमै बलियो छ । दर्शकलाई कथाले अन्त्यसम्म बाँधेर राख्छ । राजस्थानका एक शहरमा बस्ने मिमी (कृति सेनन)को सपना बलिउडको हिरोइन बन्ने हो । उसलाई पैसाको जरुरत छ । अर्कोतर्फ ड्राइभर भानुप्रताप पाण्डे (पंकज त्रिपाठी) एक अमेरिकी दम्पत्ती लिएर घुमिरहेका छन् । ती दम्पत्तीलाई एक यस्तो युवतीको आवश्यकता छ, जसले भाडामा कोख दिन सकोस् । किनभने उनीहरु भाडामा कोख लिएर एउटा सन्तानको आमाबुवा बन्न चाहन्छन् । यसै क्रममा मिमी भेटिन्छिन् । उनलाई पैसाको खाँचो त छ नै । आफ्नो गर्भमा अरुको बच्चा हुर्काएबापत उनले लाखौं पैसा पाउनेछिन् । यही प्रलोभनमा परेर उनी सेरोगेसी सन्तान जन्माउन तयार हुन्छिन् । मिमीले घरवालालाई भन्छिन्, ‘मलाई